स्याङ्जाका कृषकहरु मौरीपालन तर्फ आकषिर्त « Hamrosyangja.com :: syangja and waling bazaar latest news, people, photos and more.
« युवा स्वरोजगारका लागि रकम वितरण
स्याङ्जाको कफी जर्मनी, जापान र अमेरिका निकासी »
स्याङ्जाका कृषकहरु मौरीपालन तर्फ आकषिर्त
महको माग बढेपछि यहाँका कृषक मौरीपालनमा आकषिर्त भएका छन् । उपभोत्ताले खोज्दा मह नपाउने कारण बढि पैसा तिरेर किन्ने वातावरण सिर्जना भएपछि कृषक व्यवसायिक मौरी पालनमा लाग्न थालेका हुन् ।
मौरीपालन सजिलो पेशा भएको र माग बढि भएको कारण धेरैले मौरी पाल्न थालेको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीले बताए । उनले भने, यो सजिलै फल पाईने पेशा भएर कृषक आर्कषिर्त बनेका छन् । मौरी पाल्नको लागी कम लगानी, जग्गा नचाहिने र असिना पानिले नविगार्ने हु“दा यसलाई सुरक्षित पेशा मानिन्छ ।
जिल्लाका विभिन्न भागमा समयमै पैयु फुलेको र फलफुल पनि प्रशस्त भएको कारण मौरीलाई चरन पुगेको छ । जिल्लामै एउटा घरमा एक वर्षा १२ किलोसम्म मह काढेको स्थानियवासी रुकुम पौडेलले बताए । उनले भने, यस पटक मह राम्रो भएको छ ।
मह व्यवसाय गर्न सके बजारको खाँचो नरहेको पौडेलले दावी छ । घरमै ग्राहक आउन थालेपछि अहिले जिल्लाका ६० वटै गाविस र २ नगरपालिकामा मौरी पालन गर्न थालिएको छ । जिल्लाको ठुलाडिहि, खिलुङ-देउराली, पौवेगौडे, दहथुम लगायतका करिव १ दर्जन गाविसमा व्यवसायीक रुपमा पौरीपालन गर्न थालिएको छ ।
मह पौष्टिक भएको कारण विदेश रहेका आफन्तलाई पठाउने बढि खोज्ने गरेको दिपक गुरुङले बताए । शुद्ध महको लागी आफुले पैसामा कञ्जुस नगर्ने गुरुङले बताए । बजारमा मह खोज्ना साथ पाईन्छ तर उनले भने, शुद्ध मह पाउनै गाह्रो छ ।
धार्मिक कार्यमा मह अनिवार्य भएको कारण महको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । महबाट आयआर्जन राम्रो हुने देखेपछि अहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले बाषिर्क ३ सयका दरले मौरी सहितको घार वितरण गर्दै आएको छ । कार्यालले दिएको र कृषकले किनेर ल्याएको पौरीको घार जिल्लामा करिव १० हजारको हाराहारीमा रहेको कृषि कार्यालले जनायो ।
मौरी पालन गर्न बढि लगानी गर्न नपर्ने कारण महिला यस पेशा बढि आकषिर्त छन् । महिलालाई सक्षम बनाउनको लागी सहारा समुहले पनि २० वटा गाविसका महिलालाई ८० घार मौरी सहित दिएको छ ।
घारबाट ६ सय जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको साहारा समुहकी महिला लघुउद्यम तथा शसक्तिकरण कार्यक्रमकी संयोजक गिरीजा काफ्लेले बताईन । उनले भनिन, गा“उका महिलाका लागी सामाजिक र आर्थिक सक्षमताको लागी हामीले मौरी पालन गर्न सहयोग गरेका हौ । सहारा समुहले घार दिएका महिलालाई कृषि विकास कार्यलयले मौरीपालन तालिम दिएको थियो ।
This entry was posted on Thursday, June 24th, 2010 at 2:39 am	and is filed under राष्ट्रिय समाचारहरु, स्याङ्जा वरीपरिबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.